China Heart foil Isitsha HT70 ifektri abakhiqizi | UJiahua
Round ucwecwe Isitsha,
Ucwecwe Catering Emathileyi,
Aluminium Ucwecwe Ukudla Iziqukathi,
Isitsha se-Oblong Foil,
Round Aluminium Ucwecwe Pan,
Isitsha se-Heart Foil Container HT70
Into No. NumHT70
Imodi: Isitsha Senhliziyo
Ukupakisha: 20000pcs / Carton
Usayizi weCtn: 615x315x615mm
sinezinhlobo zenkomishi yekhekhe lekomishi, izifunda ezahlukahlukene zinomkhuba ohlukile wokusetshenziswa, ngakho-ke singakwazi ngokuya ngezidingo zamakhasimende, sivule isikhunta.
I-Allwin Pack isebenzisa izinto zokusetshenziswa zonke ezihambisana nezindinganiso zomhlaba wonke zemvelo, konke kuyibanga lokudla.Sakhe ubambiswano lwesikhathi eside namakhasimende aseNyakatho Melika, eYurophu, eJapan, e-Australia, e-Asia kanye nezindiza, isuphamakethe, ukudla nokudla abakhiqizi.
Umkhiqizo Isithombe Into No. I-HT70
Ukupakisha 20000pcs / ibhokisi
Usayizi weCtn 615x315x615mm
Isitsha esincanyana kakhulu nesithandekayo se-foil esinesimo senhliziyo esikhethekile, esenzelwe izinsuku ezikhethekile namaqembu
Ukuqhuba kahle ukushisa. Isisindo esincane kepha siqinile, siqine ngokwanele ngezidingo zokubhaka
Idizayini elahlwayo, vele ulahle la mapani futhi asikho isidingo sokukhathazeka ngokukhuhla nokuhlanzwa
Ilungele izimpahla ezincane ezibhakiwe njenge-pudding, i-jelly, ikhekhe nazo zonke izinhlobo zabantu abazisebenzelayo
Kungani Aluminium Ucwecwe?
Ucwecwe lwe-Aluminium kuzicelo zokupakisha zokudla neziphuzo konga izinsiza eziningi kunalokho okudingekayo ekukhiqizeni kwayo. Ukuhlola okuhlukahlukene kweLife Cycle (LCAs) kukhombisa ukuthi ukufakwa kwe-alufoil kanye ne-foil yasendlini kunikela ngaphansi kuka-10% womthelela wezemvelo kumjikelezo wempilo womkhiqizo - Ukukhiqizwa okusimeme nokusetshenziswa.
2. Ukuvikelwa kwesithiyo
Umgoqo ophelele we-aluminium ekukhanyeni, amagesi nomswakama yisizathu esiyinhloko sokusetshenziswa kwawo kuma-laminates aguquguqukayo ekudleni, ekuphuzeni nasezinsizeni zobuchwepheshe. Noma ngabe mncane kakhulu unikeza ukuvikelwa okuphelele nokulondolozwa kwephunga nezici zomkhiqizo. Kungasiza ukunweba impilo esebenzayo yemikhiqizo ebucayi izinyanga eziningi, ngisho neminyaka, igcina ngokuphelele iphunga langempela. Ngokuvumela imikhiqizo ukuthi igcinwe isikhathi eside ngaphandle kwesidingo sefriji, i-Aluminium foil package isiza ukuvikela ukonakala futhi inganikeza nokonga amandla amakhulu.
Ukukhuthaza ukupakisha kwe-aluminium njengemishini, ukuze kuncishiswe ukungcoliswa kwemvelo, ukwakha intuthuko esimeme, i-carbon ephansi kanye nokuvikelwa kwemvelo kwendawo yokusinda njengemishini.
1.On ehlukile kumikhiqizo yepulasitiki kunciphisa ukungcola okumhlophe;
2.Ukunciphisa isabelo samaphakethe asuselwa ephepheni ezimpahla zabathengi ezilahlwayo kusiza ukunciphisa ukugawulwa kwamahlathi nokungcola kwemithombo yamanzi embonini yamaphepha;
3.Ukuhlanganisa ukuhlanganiswa kwe-aluminium foil yokuvuselela kabusha izinsiza zomphakathi, ukugcwaliseka kokusakazwa okungapheli kwezinsizakusebenza ze-aluminium kanye nomgwaqo oya ekuthuthukisweni okusimeme kwezwe. Lokhu kungumsebenzi wethimba lethu, futhi njengokuzibophezela.
Langaphambilini Isitsha se-Heart Foil Container HT02
Olandelayo: Isitsha se-Heart Foil Container HT100
Aluminium Ucwecwe Iziqukathi Nge Zamabhodlela
Aluminium Ucwecwe alahlwayo Ukudla Iziqukathi
Aluminium Ucwecwe Ukudla Iziqukathi
Aluminium Ucwecwe Khipha Iziqukathi
I-Alu Polygonal Container SP2600
Igobolondo Pan SH104
Isitsha se-Heart Foil Container HT100
Isitsha se-Heart Foil Container HT02
I-Aluminium Barbecue Tray BBQ1990R
Isitsha se-Heart Foil Container HT520